Charles Richter - Inventor ye Richter Kubwinya Kwakawanda
History & Culture Zvizivikanwa zvinozivikanwa
Charles Richter akavaka Richter Scale - NEIS Hurukuro
Mafungu ekusviba ndeyekudengenyeka kubva kudengenyeka kwenyika kunofamba nepasi Pasi; izvo zvakanyorwa pazviridzwa zvinonzi seismographs. Seismographs rekodi ye-zig-zag trace iyo inoratidza kusiyana kwakasiyana kwezvisikwa zvepasi pasi pechimbo. Sensitive seismographs, iyo inokurudzira zvikuru maitiro aya, inogona kuona kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunobva munzvimbo dzose munyika. Nguva, nzvimbo, uye hukuru hwekudengenyeka kwenyika zvinogona kutsanangurwa kubva kune dhesi rakanyorwa ne-seismograph stations.
Shanduro yakakura yeRichter yakaumbwa muna 1935 naCharles F.
Richter weCalifornia Institute of Technology semutambo wemasvomhu kuenzanisa ukuru hwekudengenyeka kwenyika. Ukuru hwekudengenyeka kwenyika kunotsanangurwa kubva kulogarithm yemakwikwi emafungu akarekanyorwa seismographs. Zvigadziriswe zvinosanganiswa pamusiyano uri pakati nepakati pezvinoshandiswa seismographs uye chinotyisa chekudengenyeka kwenyika. Pamusoro peRichter Scale, hukuru hunoratidzwa muhuwandu hwakazara uye zvikamu zvepamusoro. Semuenzaniso, kukwirira 5.3 kunogona kuenzaniswa nekudengenyeka kwenyika, uye kudengenyeka kwenyika kunogona kuverengwa sehukuru 6.3. Nokuda kweshoko relogarithmic yechiyero, nhamba yega yega yega inowedzera mukukwirira inomiririra kuwedzera kagumi pakuyera mamita; sekuongororwa kwemasimba, imwe nhamba yose yakawanda mumwero wakakura inofananidzwa nekubudiswa kweanenge makumi maviri nemakumi maviri emagetsi kudarika chiyero chinosanganiswa neiyo yakatarwa yenhamba yose yenhamba.
Pakutanga, Richter Scale inogona kushandiswa chete kune zvinyorwa kubva kune zvishandiso zvakafanana zvinogadzirwa. Iye zvino, zviridzwa zvakanyatsogadziriswa nekuremekedzana kune umwe neumwe. Nokudaro, hukuru hunogona kuverengwa kubva pakurondedzero yezvimwe zvakanyorwa seismograph.
Kudengenyeka kwenyika nehukuru hweenenge 2.0 kana zvishoma kunowanzonzi microearthquakes; ivo havasati vanzwa manzwiro evanhu uye kazhinji vanyoresa chete pane seismographs.
Zviitiko zvine hukuru hwema4,5 kana kupfuura - kune zviuru zvinomwe zvinoshungurudzika gore negore - zvakasimba zvakakwana kuti zvinyorwe nenyanzvi dzekusangana pasi rose. Kudengenyeka kwenyika kukuru, kwakafanana nekudengenyeka kwenyika kweChishanu yeChishanu muna Alaska, kune hukuru hwe8,0 kana kupfuura. Pakati pepakati, kudengenyeka kwepasi kumwe kwehukuru hwakadaro kunowanikwa kune imwe nzvimbo munyika gore negore. Richter Scale haisi yepamusoro. Munguva pfupi yapfuura, imwe shanyo inonzi iyo nguva yakakura chikamu yakagadzirirwa kunyatsodzidza nekudengenyeka kwenyika kukuru.
Richter Scale haisi kushandiswa kuratidza kukanganisa. Kudengenyeka kwenyika munzvimbo ine vanhu vakawanda iyo inokonzera kufa kwevakawanda uye kukanganisa kukuru kunogona kuenzana nekushamisika munzvimbo iri kure kurega kunotyisa zvisikwa zvipenyu. Kubva kukuru-kudengenyeka kwenyika kunoitika pasi pegungwa hakungatombotauri nevanhu.
Zvinotevera ndezvinyorwa zvehurukuro yeNET neCharles Richter
Wakave sei uchifarira seismology?
CHARLES RICHTER: Chakanga chiri njodzi inofadza. PaCaltech, ndaishanda paF.D yangu. mune fiery physics pasi peDr. Robert Millikan. Rimwe zuva akandidana muhofisi yake ndokutaura kuti Seismological Laboratory yakanga iri kutsvaga chifizikiki; iyi yakanga isiri mutsara wangu, asi ini ndakanga ndichida here?
Ndakataura naHarry Wood uyo akanga ari mutariri webazi; uye, somugumisiro, ndakabatana nemushandi wake muna 1927.
Chii chaive chivako chechigadzirwa chakakura?
CHARLES RICHTER: Pandakazobatana naVaMuz Wood, ndainyanya kubatanidzwa mubasa rekuyera kuenzanisa nekuona kudengenyeka kwenyika, kuitira kuti bhuku rinogona kugadziriswa yezvakaitika uye nguva dzezvinoitika. Sezvineiwo, seismology inokwereta chikwereti chikuru chisingawanikwi pamabasa anoramba achiitwa naHerry O. Wood pakuunza purogiramu ye seismological kumaodzanyemba kweCalifornia. Panguva iyoyo, Mr. Wood akanga achibatana naMaxwell Alien pane chiitiko chezvekare chekudengenyeka kwenyika muCalifornia. Takanga tichinyorera pazvivako zvinomwe zvakaparadzana zvakaparadzana, zvose zvine Wood-Anderson kutambudzwa seismographs.
I (Charles Richter) akaratidza kuti tingafananidza kudengenyeka kwenyika maererano nema amplitudes akaenzana akanyorwa pazvivako izvi, ane kururamisa kwakakodzera kwemaiva. Wood uye ini takashanda pamwe chete pamusoro pezviitiko zvitsva, asi takaona kuti taisagona kuita zvigutsikane zvinogutsa zvekucherechedza nechokure. Ndakawana pepa naProfesa K. Wadati wekuJapan umo akafananidza kudengenyeka kwenyika kukuru nekugadzirisa nzvimbo yakawanda yepamusoro pakatarisana nechekuenda kune epicenter. Ndakaedza nzira yakafanana yezvivako zvedu, asi rutivi rwakanga rwuri pakati pehukuru uye hudiki kuduku hunoratidzika rukuru. Dr. Beno Gutenberg akabva aita maitiro echisikigo kuti agadzire amplitudes logarithmically. Ndakanga ndine nhanho nokuti maitiro e-logarithmic inguva yedhiyabhorosi. Ndakaona kuti zvino ndaigona kukwanisa kudengenyeka kwepasi kune imwe pamusoro peimwe. Uyezve, zvisingatarisirwi kutarisa kwemafuti kwaive kwakangofanana nechokuita. Nokuvafambisa vertical, mumiririri anoreva kureveka kunogona kuumbwa, uye zviitiko zvega ega zvakabva zvichisarudzwa nemararamiro egaarithmic kubva pamutsetse wakaenzana. Izvi zvakagadziriswa nelogarithmic saka yakava nhamba pane chimwe chinhu chakashandiswa pachikoro. Kunyatsonzwisisa kwazvo, Mr. Wood akasimbisa kuti ichi chitsva chinofanira kupiwa zita rakasiyana kuti rienzanise naro nehuwandu hwechikwata. Kufarira kwangu nyanzvi mune zvekuongorora nyeredzi kwakabudisa izwi rokuti "ukuru," iyo inoshandiswa mukupenya kweredzi.
Ndezvipi kuchinjwa kwaibatanidzwa pakushandisa chiyero kudengenyeka kwepasi pose?
CHARLES RICHTER: Uri kunyatsotsanangura kuti chikamu chepakutanga chandakabudisa muna 1935 chakagadzirirwa chete kumaodzanyemba kweCalifornia uye nezvemhando dzakasiyana dze seismographs inoshandiswa ipapo.
Kuwedzeresa kuyerwa kwenyika kudengenyeka kwenyika uye kudhindwa kune zvimwe zviridzwa kwakatanga muna 1936 pamwe chete naDkt Gutenberg. Izvi zvaisanganisira kushandiswa kwema amplitudes akataurwa pamusoro pemafungu emvura ane nguva yemaminitsi makumi maviri. Zvichiitika, iyo inowanzonzi mazita ekukwirira kwezita rangu inoita zvishoma kudarika kururamisira kune chikamu chikuru icho Dr Gutenberg akamboita mukuwedzera chiyero kuti chishandise kudengenyeka kwenyika munzvimbo dzose dzepasi.
Vanhu vazhinji vane mafungiro asina kunaka kuti Richter ukuru hunobva pachiyero chegumi.
CHARLES RICHTER: Ndinowanzofanira kugadzirisa kutenda uku. Nenzira imwechete, ukuru hunosanganisira matanho e10 nokuti kuwedzera kwose kwehukuru kunomiririra kukudziridza kwegumi kwekufamba kwevhu. Asi hapana chiyero chegumi mumutanho wekumusoro-soro sezvo pane zvekuyera zviyero; Zvechokwadi, ndinofara kuona mhizha ikozvino inotaura nezvechikwata cha Richter chakaguma. Kuwanda kwenhamba nhamba inongomiririra kuenzaniswa kubva pane seismograph rekodi - logarithmic kuva nechokwadi asi pasina chifukidzo chisingatauri. Ihwo hukuru hukuru hwakatumirwa kusvika kure nekudengenyeka kwenyika kwechokwadi hunenge makore 9, asi iyo inopera muPasi, kwete muzinga.
Pane chimwe chinhu chisinganzwisisiki chinoratidza kuti ukuru hwekukura kwayo pachako humwe rudzi rwechiridzwa kana zvigadzirwa. Vashanyi vachawanzokumbira kuti "vaone chikero." Vanovhiringidzika nokuendeswa kumatafura nemasharu ayo anoshandiswa pakushandisa chiyero kuverenga zvakatorwa kubva kumhepo.
Hapana mubvunzo kuti iwe unowanzobvunzwa pamusoro pemusiyano pakati pehukuru nekukura.
CHARLES RICHTER: Izvo zvinokonzera kuvhiringidzika kukuru pakati pevanhu. Ndinoda kushandisa chienzanidzo neredhiyo yekutumira.
Inoshanda mune seismology nokuti seismographs, kana kuti vanogamuchira, inonyora mafungu ekunetseka kwakasununguka, kana mazaisai eredhiyo, ayo anodonhedzwa kubva kunzvimbo yekudengenyeka kwenyika, kana nzvimbo yekuparidzira. Hukuru hunogona kuenzaniswa nehuwandu hwemagetsi mu kilowatts yechiteshi chekuparadzira. Nharaunda yemunharaunda ye Mercalli scale ndiyo inofananidzwa nemasimba emagetsi kune anogamuchira kune imwe nzvimbo; zvirokwazvo, unhu hwechiratidzo. Simba sechiratidzo chemasimba rinowanzosvika kure nechechi, kunyange zvichitenderera nemamiriro ezvinhu epamba uye nzira kubva kune imwe nzvimbo kusvika kune imwe nzvimbo.
Pakava nehanya munguva pfupi pakuongorora zvakare zvinorehwa ne "ukuru hwekudengenyeka kwenyika."
CHARLES RICHTER: Kuchenesa hakudzivisiki mune sayenzi kana waita zviyero zvechiitiko kwenguva refu.
Chinangwa chedu chepakutanga chaiva chekutsanangura hukuru zvakasimba maererano nekutarisa kwezvinhu. Kana imwe inotanga pfungwa ye "simba rekudengenyeka kwenyika" iyo ndiyo inoretically yakawanda yakawanda. Kana pfungwa dzaishandiswa mukuverenga simba dzakashandurwa, zvino izvi zvinonyanya kubata chigumisiro chekupedzisira, kunyange zvazvo muviri iwoyo we data ungashandiswa. Saka takaedza kuchengetedza kududzirwa kwe "ukuru hwekudengenyeka kwenyika" kwakanyatsobatanidza kune chaiyo yekucherechedza zvishandiso zvakabatanidzwa sezvinobvira. Izvo zvakabuda, zvechokwadi, ndeyekuti ukuru hwekukura kwakaratidza kuti kudengenyeka kwenyika kwose kwakangofanana kunze kwekugara kuchiwedzera chikonzero. Uye izvi zvakaratidza kuva pedyo nechokwadi kupfuura zvataitarisira.
Ramba> Nyaya yeSeismograph
Nhoroondo yeCellophane Firimu
Unyanzvi hunofunga hwekufunga - Kubata Kufunga
Nhoroondo Pfupi YeDuct Tape
Zvekurima uye Farmer Innovations
William Sturgeon uye Kuzvidzivirira kweMagetsi
Ndiani Akavhura OLED Technology?
Mwedzi waFebruary Wakawana Zita Rake Sei?
Yunivhesiti yeTulsa GPA, SAT uye ACT Data
Dzidza Nzira Yokugadzirisa "Neiger" (kune Snow)
Kushandisa Mafashoni Akasiyana Nezvokutengesera Kwema Commerce
5th Grade Science Fair Mirairo
Ndezvipi Zvizhinji zveDhiyabhorosi?
Tsanangudzo uye Mienzaniso yeSymbolism
Murairo weChipfuva MuRodeo's Team Roping Event
Porter, S'habiller, Se Mettre En ... Kutaura "Kupfeka" MuFrench
Ndezvipi Kusiyana kweR Rollerblade Bearings?
Rwendo Rwose Kurarama US Presidents
Jesu Anotuka Muonde (Mako 11: 12-14)
20 Mufananidzo weTattoos Wakauya Uchitadza Hwakaipa
Biographical Mashoko echiGiriki Philosopher Aristotle
Top 10 Mifananidzo Dzakanakisa paTerevhizheni
Zvidzidzo Zvidzidzo zvepamusoro zveEst uye EFL
Mabasa Akanakisisa KwaVadzidzisi vekare
Zvematongerwo enyika Geography Yemakungwa
Nyota Wars Character Profile: Mace Windu
Nheyo Dzinokosha dzeUtilitarianism
Chii chakanga chiri 'Spoon' Golf Club?
Chii chaiva Umambo hweBaekje?
Unyanzvi Hwakanyanya Kuoma muvakadzi veGymnastics
Kutsungirira Rudo Rwiyo rwema1950s
Dance Moves ye1950s